बेडरुममा एक्लै भएपछि किन लाग्छ नितालाई यस्तो रहर ? (भिडियो सहित) – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityबेडरुममा एक्लै भएपछि किन लाग्छ नितालाई यस्तो रहर ? (भिडियो सहित)
बेडरुममा एक्लै भएपछि किन लाग्छ नितालाई यस्तो रहर ? (भिडियो सहित)
March 16, 2018 sutraentertainment Celebrity, Entertainment, Event, Female, Kollywood, News, Videos 0
यतिबेला नायिका निता ढुंगाना निकै चर्चा परिचर्चामा पनि छिन् । यतिबेला निता अभिनित चलचित्र ‘हुर्रे’ हलमा लागिरहेको छ भने अर्को प्रतिक्षित चलचित्र ‘पञ्चायत’ आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ । सँधै कुनै स्थानमा बसेर पत्रकारसँग कुरा गरेकी या मिडिया हाउससम्मै पुगेर अन्तरवार्ता दिएकी ढुंगाना आज आफ्नै बेडरुममा बसेर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गरिरहेकी छिन् । आफ्नै बेडरुममा बसेर आफै बुम समाएर बोल्न पाउदा अभिनेत्री ढुंगानाले निकै आनन्द महसूस गरेकी छिन् ।
आफ्नै घर त्यसमाथि पनि बेडरुममै पत्रकारसँग कुरा गर्न पाएकी निताले जाडो मौसम भन्दा पनि आफूलाई गर्मी मौसम मन पर्ने बताईन् । बेडमै पत्रकार भेटेकी निताले मन खोलेर कुरा गरिन् । आज उनले चलचित्रका कुराकानी भन्दा पनि धेरै व्यवहारीक कुरा गर्न रमाईन् । घरमा खाना पकाउने बिहान कतिबेला उठ्ने भन्नेबारे निताले मन खोलिन् ।
आफ्नै घर पुगेका सञ्चारकर्मीसँग निताले आफ्नो घर सानो भएको र यही सानो घर आफूलाई स्वर्ग लाग्ने बताईन् । निताले आफ्नो घरभित्र पनि आफूलाई मन पर्ने कुरा यसरी बताई । निताले घरमा कोही नभएकोबेला बेडरुममै लाउड म्यूजीक लगाएर नाच्ने गरेको बताईन् । उनले नाँच्दै भाँडा धुने, खेल्ने, नाँच्ने र हाँस्ने बताईन् । उनले एक्लै हुँदा आफूले बेडरुममा गीत बजाएर नाँच्ने गरेको कसैले कल्पना गर्न नसक्ने बताईन् ।
बैशाख ७ मा प्रदर्शन हुने ‘सुपर गोर्खे’ को प्रोमो सार्वजनिक
‘डमरुको डण्डीबियो’ को पहिलो गीत सार्वजनिक, डण्डीबियो खेल्दै खगेन्द्र (भिडियो)